umatshini owenza iintlanzi ukwenza umngxunya wokutya wepellets kunye nokutya kwesilwanyana sasekhaya
Isilwanyana sasekhaya & IFish Pellet Ukwenza umatshini wesicelo
Umatshini wethu wokudala iintlanzi ulungele ukuveliswa kweepellets ezivela kwingqolowa, ingca, iiprotheyini kunye neesolves zentengiso. Imveliso yethu yokuphelisa imveliso yeepellets zinezinto ezintle ezenziwe kakuhle, bazizityebi, yiva incasa eyahlukileyo, kwaye ziimilo ezahlukeneyo. Zilungile kwizilwanyana zasemanzini ezinjengeembatyana, intlanzi yegolide, intlanzi yekati, iintlanzi zestropiki njl.
Kutheni ukhetha umatshini wokuhambisa iintlanzi ezityibilikayo
Iipellets zokutya kweentlanzi kukutya okutywayo kwezolimo zangoku, ukubonelela ngesondlo esifanelekileyo kwisitokhwe seentlanzi kunye nokuphucula imeko yeefama zeentlanzi. Ngenxa yexabiso eliphezulu leepellets zokutya kwintengiso, amafama amaninzi adla ngokuthenga izixhobo zokwenza iintlanzi zepellet ukuze zivelise zodwa ngexabiso eliphantsi. Apha eyomileyo uhlobo lokutya luyacetyiswa ngokwenza iipellets zokutya ezidadayo, leliphi na ingcali elinegalelo ekutyeni okuphezulu kweentlanzi zokutyibilika ngaphandle kwemeko yomphunga yezixhobo eziluhlaza. Nge-extruder eyodwa yokuqhubela phambili ngesantya somqhubi ngebhanti, umatshini wokudada wepellet weentlanzi sisixhobo esifanelekileyo kwizityalo ezincinci nezincinci zokuphanda ukondla kunye nemifuziselo yamanzi.
Izinto eziluhlaza zoomatshini beNtlanzi bePellet
● Iitrawuthi ezisemgangathweni zeePellets zokutya zibandakanya iproteni yezilwanyana kunye neproteyini yesityalo. Iprotein yezityalo ivela kumbona, irayisi, ingqolowa, isoya, ipani yekhekhe yomgubo, njl; Iproteni yezilwanyana ivela ekutyeni kwentlanzi, isidlo sangombala, isidlo se crab, isidlo-intlanzi yokutya njalo njalo unokongeza esinye isithako ngokweemfuno kunye nokutya kwezilwanyana.
● Eyona nkqubo ibandakanyekayo:Ukugaya izinto, ukuxutywa kwezinto, iipellets ezikrwada, i-pellets isomisa, kunye nokupakisha kwepellet. Yonke inkqubo inokulawulwa ngokuzenzekelayo.
Iimpawu zoMatshini weFish Pellet Ukwenza umatshini
2. I umatshini wokupheka wepellet uhlala kwindawo encinci yomgangatho kwaye ufuna utyalomali olusezantsi kumsebenzi wokwakha. Ubume bemodyuli bulungele ukuhlangana kunye ne disassembly, ukuhambisa ukuthutha kunye nokufakwa.
3. Ukulawulwa ngokuzenzekelayo, isixhobo se-alamu siyafumaneka. Umsebenzi ulula kwaye ululungele.
4. Ububanzi obusebenzayo: Umatshini wokudada we pellet wentlanzi unokuvelisa zombini ukutya okuloba kunye nokuntywila kweentlanzi, kusebenza kubanini beentlanzi kunye nabavelisi beentlanzi.